Dhalinyarada Gaalkacyo Oo u istaagaya Sugida Amaanka iyo isku keenka Bulshada – SBC
Dhalinyarada Gaalkacyo Oo u istaagaya Sugida Amaanka iyo isku keenka Bulshada
Posted by Webmaster on February 27, 2012 Comments
Ururada Dhalinyarada ee ka kala jira Maamulada Puntland iyo Galmudug ee magaalada Gaalkacyo ayaa kulan isugu yimid Xarunta Iskoolka Umada ee Magaaladaasi Gaalkacyo kaasi oo ku aadanaa Arimaha Bulshada iyo Amaanka.
Dhalinyaradii halkaasi isugu timid ayaa ka wada hadlay arimaha daruuriga u ah bulshaweynta gobolka siiba Arimaha amaanka oo ay sheegeen in ay tahay mid muqadis ah oo ka dhalinyaro ahaan ay kaaliweyn ka qaataan isbed bedelka amaanka loona baahan yahay in loo raaco dhanka wanaagsan laguna dadaalo isii loo sugilahaa.
waxayna dhalinyaradii halkaasi ku sugneyd isku afgarteen in ay u istaagaan sidii amaanka ay wax uga qaban lahaayeen ugalana qeyn qaadan lahaayeen laamaha amaanka sugida amniga .
Waxaa kulankooda ka soobaxay go’aamo dhowr ah oo loomarayo Sugida Amaanka sida in la qabto tartan ciyaareed kubadda Cagta ah oo lagu kala ciyaaridoono labada dhinac ee Magaalada .
Sikastaba ha ahaatee dhalinyaradii kulankaasi ku sugneyd waxa ay ku tilmaameen kulankooda fariin dhab ah oo ay ugu dirayaan dadweynaha sidii loo sugi lahaa Amaanka ayna ka dhalinyaro ahaan siweyn ugu istaageen sigida Amniga.